Kuhle Steel Tube isitaki Umkhiqizi kanye Factory | I-Teneng
Izitolo Zokwakha, Indawo Yokukhiqiza
20-40m / iminithi
Ukusekelwa okuku-inthanethi, Onjiniyela batholakalela imishini yesevisi phesheya kwezilwandle
erw tube isigayo
Ikhoyili yensimbi yeCarbon
Round ipayipi, isikwele ipayipi & isikwele ipayipi. ipayipi le-ovel,
Isaha yokugaya ejikelezayo
Izinzuzo zethu zinciphisa amanani, ithimba lokuthengisa elinamandla, i-QC ekhethekile, izimboni eziqinile, izinsizakalo ezisezingeni eliphezulu nemikhiqizo yeTop Quality China Tube / Pipe End Expanding Machine for Pipe Mill, Umqondo wenkampani yethu uthi “Ubuqotho, Isivinini, Isevisi, kanye Nokwaneliseka ”. Sizolandela lo mqondo futhi sinqobe injabulo enkulu kakhulu nangaphezulu yamakhasimende.
Umshini Osezingeni Eliphezulu we-China, i-Expander, Phakathi neminyaka emifushane, sikhonza amaklayenti ethu ngokwethembeka njenge-Quality First, i-Integrity Prime, i-Delivery Timely, esizitholele idumela elivelele kanye nephothifoliyo yokunakekelwa kwamakhasimende ehlaba umxhwele. Ngibheke phambili ekusebenzeni nawe manje!
Inhlangano iqhubeka nomqondo wenqubo "ukuphathwa kwesayensi, ikhwalithi ephezulu nokusebenza kahle, umthengi ophakeme weminyaka engu-8 Umthumeli waseChina Umshini Wokushaya Amashidi we-China ne-Tube Mill Milling Machine, Siyakwamukela ukuthi ube yingxenye yethu eceleni komunye nomunye ukwenza inhlangano yakho ibe lula . Sibe ngumlingani wakho omkhulu kakhulu lapho ufuna ukuba nebhizinisi lakho elincane.
Iminyaka eyi-8 Isithumeli se-China se-miller, i-milling lathe, Qiniseka ukuthi uzizwa ungabizi ukusithumela ama-specs akho futhi sizokuphendula nge-asap yakho. Sineqembu lobunjiniyela elinolwazi lokusebenzela izidingo zonke eziphelele. Amasampula wamahhala angathunyelwa wena uqobo ukuze wazi amaqiniso amaningi kakhulu. Ukuze ukwazi ukuhlangabezana nezifiso zakho, sicela uzizwe ungabizi kakhulu ukuxhumana nathi. Ungathumela ama-imeyili usishayele ngqo. Ngokwengeziwe, siyakwamukela ukuvakashelwa efektri yethu evela kuwo wonke umhlaba ukuthola kangcono kakhulu inhlangano yethu. nd okuthengiswayo. Ekuhwebeni kwethu nabathengisi bamazwe amaningana, sivame ukulandela umthetho wokulingana nokusizakala ngokuhlanganyela. Kuyithemba lethu ukumaketha, ngemizamo ebambisene, kokubili ukuhweba nobungane ukuze kuzuze thina sobabili. Sibheke phambili ekutholeni imibuzo yakho.
I-Shijiazhuang Teneng Electrical & Mechanical Equipment Co, Ltd ingumkhiqizi oqeqeshiwe we ashiselwe steel ipayipi ukukhiqizwa umugqa, abandayo roll ukwakha umugqa, uqhoqhoqho umugqa, cut-to-ubude umugqa kanye ahlobene imishini esizayo. Inkampani iTeneng ibhizinisi lesimanje elikwazi ukucwaninga futhiukuthuthukiswa, ukukhiqizwa nokuthengiswa. UTeneng uyilungu lomkhandlu weChina Roll Forming Association,ilungu lomongameli we-Hebei Steel Tube Trade Association.Imishini ye-Teneng iyimishini yokukhiqiza ithubhu esebenza kahle kunazo zonke emhlabeni.E-China, abasebenzisi abaziwayo yi-Hebei Jingye Group, iSANY Group, i-China Shipbuilding Industry Corporation, Chongqing Changzheng Heavy Industry Co., Ltd njll.
Langaphambilini Okugcwele othomathikhi steel ipayipi nokupakisha umshini
Olandelayo: Umshini we-Steel Tube Bundling
umshini wokuhlanganisa ipayipi
Okugcwele othomathikhi steel ipayipi bundling & packi ...